minthantzaww: ကျော်နိုင် ခွနိုင်ဖို့ ဝက်ဆိုက် တွေပါ
နိုင်ငံခြားက ဆိုက်တွေကို မြန်မာပြည်က အလွယ်တကူ ကြည်နိုင်ရန်အတွက် ကျော်နိုင် ခွနိုင်ဖို့ ဝက်ဆိုက် တော်တော်များများကိုရှာဖွေ စုဆောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေအတွက် မလိုအပ်ပေမဲ့ မြန်မာက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။
အချို့ဆိုဒ်တွေမှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အလွယ်တကူ ဖွင့်လို့မရတာတွေ ဒါမမဟုတ် ကွန်နစ်ရှင် မကောင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် Proxy Sites လေးတွေ အကူအညီနဲ့ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေကို ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ကျော်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လေ့လာ စုဆောင်းထားတဲ့ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဆိုဒ်လေး တွေကို ရွှေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ မြန်မာက သူငယ်ချင်းတွေပါ။ G talk , Ning.com Multiply ,Youtube ,Gmail ,Blogspot , စတဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှန်သမျှ အောက်က Proxy site လေးတွေ အကူအညီနဲ့ ကျော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေ သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုမရရင် တစ်ခု ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။ ရတဲ့ ဆိုက်လေးတွေကို မှတ်ထားပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ? .... ဒါကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ကျော်ဖွင့်တာက ထွေထွေထူထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုဒ်များထဲမှ နှစ်သက်ရာ လင့်တစ်ခုကို အရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ် ဖွင့်လိုတဲ့ ၀က်ဆိုဒ် လိပ်စာကို ရေးထည့်ရန် Box လေး ပါပါတယ်။
အဲဒီနေရာ လေးထဲမှာ Box လေးထဲမှာ မိမိ ဖွင့်လိုတဲ့ ဝက်ဆိုက်လိပ်စာ လင့်လေးကို ရေးထည့်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အားလုံး ရှင်းသွားအောင် ပုံလေးပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဥမမာhttp://backfox.com/ ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ http://backfox.com/ ပေါ်လာတာနဲ့ Box နေရာလေးပါတယ်။ အဲဒီနေရာလေးမှာ
ကျွန်တော်ဆိုက်လေးရဲ့ လိပ်စာ http://www.mawcity.com/ ရေးထည့်လိုက်ပြီ။ ခဏနေတာနဲ့ ကျွန်တော့်ဆိုက်လေး ပေါ်လာပါတယ်။ မိမိကြည့်ချင်တဲ့ဆိုဒ်နာမည် (လိပ်စာ) ရေးပြီးရင်Go ကိုနှိပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော် ... Begin Browsing နှိပ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင် Enter ခေါက်ပေါ့။ မရှင်းသေးရင်လည်း သားကိုထပ်မေးပါ။
ဘာမှမတတ်ပါဘူး သိတာတွေကို ပြန်လည်မျှဝေတာပါ။ သားအကောင့်က hackerhero.2099@gmail.com ပါ။ တကယ်သိနေရင်လည်း သားသား မသိတာတွေကို ပြန်သင်ပေးပါနော် .... အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဂျာ ....
♥ ♥ ♥ ကျော် ခွ ရန် Proxy များ ♥ ♥ ♥
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေစွာ ကျော်နိုင်ခွနိုင်ပါစေ။
Posted by minthantzaww at 09:17